Hetsika Dinika ho fanavotam-pirenena : « Handrafitra fijery sy fandaminana vaovao isika » | NewsMada
Hetsika Dinika ho fanavotam-pirenena : « Handrafitra fijery sy fandaminana vaovao isika »
Hevitra sy hetsika hafa koa. Nitohy, omaly, ny antso ho an’ny dinika ho fanavotam-pirenena tarihin’ny Hetsika ho an’ny fanavotam-pirenena. Tsy hihemotra intsony izy ireo amin’ny hanaovana ny fihaonambem-pirenena.
« Hiroso amin’ny dinika ho fanavotam-pirenena isika. Manao antso avo izahay ary mitaona ny olom-pirenena hanandratra ny toetra sy kolontsaina manohitra ny tsy rariny ary hiroso indray hanangana ny hoaviny. Miantso ny vahoaka koa hanao rodobe sy hiray hina, handrafitra fijery vaovao sy fandaminana vaovao ho antoky ny taranaka », hoy ny fanambaran’ny mpitarika sendikà, Ratolojanahary Maharavo na i Doudou tetsy Andrainarivo, omaly. Niantso ny rehetra izy ireo handray anjara amin’izany dinika ho fanavotana ny firenena izany. Anisan’izany ny antoko sy ny fikambanana politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpino rehetra ; ny ray aman-dreny ara-drazana, ny tantsaha, ny manampahaizana, ny vehivavy, ary ny tanora. « Hifarimbona isika hamolavola sy hampanjary ny dinika », hoy ihany izy.
Iray ihany ireo mpanao politika sy ny mpitondra
Notsiahivin’izy ireo fa nahatoky ny mpitondra ny vahoaka tany am-piandohana. Tsy araka izany intsony anefa ny tranga miseho amin’izao fotoana izao. Nahitsy izy ireo naneho hevitra momba ny mpanao politika. « Anaty fahalovana tanteraka izany. Manararaotra ny fahefany ny manam-pahefana. Mpanao politika sasany manohitra mafy nefa voaporofo fa tia fahefana sy harena… Samihafa ny toerana misy azy ireo saingy ny fijery sy ny toetra ary ny fomba fiasa iray ihany », hoy ny hetsika ho an’ny dinika ho fanavotam-pirenena.
Manoloana izany takin’izy ireo ny hampijoroana sy hananana fahefam-panjakana miray hina sy matanjaka atokisan’ny vahoaka sy miaro azy. Manome fahalalahana sy mitandro ny fitovian-jo ary firaisankina.
Ho tonga hatraiza indray izao dingana hirosoan’ny Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena izao ?